ပါဠိကို Canon ကနေဘာသာပြန်ထားသောဗုဒ္ဓဘာသာများ၏ပဉ္စမဥပဒသေမြား, "ငါသည် heedlessness များအတွက်အခြေခံနေသောချဉ်နှင့်ရေစက် intoxicants ကြဉ်ရှောင်ဖို့လေ့ကျင့်ရေးစည်းမျဉ်းကိုဆောင်ရွက်ရန်။ " ဖြစ်ပါတယ် ဒီအတောအတွင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသောက်ထင်မထားပါသလား?
ဒါဟာတစ်ဦးဉာဏ်အလင်းဖြစ်လျက်ရှိသဘာဝကျကျတိုင်းအခြေအနေမှန်ကန်စွာနှင့်ကြင်နာစွာတုံ့ပြန်ကြောင်းသိရသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်, ထို ဥပဒသေမြားဗုဒ္ဓ၏ဘဝအသက်တာကိုဖော်ပြရန် ။
သူတို့ကမေးခွန်းတစ်ခုကိုမပါဘဲနောက်တော်သို့လိုက်ခံရဖို့ပညတ်တို့ကိုကျင့်သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစာရင်းကိုမရှိကြပေ။ အဆိုပါဥပဒသေမြားနဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့အလင်းပေးသတ္တဝါတွေအသက်ရှင်သည်အတိုင်း, ပိုမိုစာနာမှုနဲ့စိနှင့်လိုက်ဖက်စွာအသက်ရှင်ဖို့ကိုယျ့ကိုယျကိုလေ့ကျင့်။
အမေရိကန် ဇင် ဆရာ, နှောင်းပိုင်းယောဟနျသ Daido Loori, Roshi, ( "kai" "ဥပဒသေမြား" အတွက်ဂျပန်သည်) ဆိုသည်ကား,
"ဒီဥပဒသေမြားဟာ Buddhadharma ၏သွန်သင်ချက်၏စုစုပေါင်းဆံ့။ ... လူတွေကအလေ့အကျင့်နှင့် ပတ်သက်. မေးလျှောက်, 'Lay အလေ့အကျင့်ကဘာလဲ' Kai ဖွဥပဒသေမြား။ '' ဘုန်းတော်ကြီးသင်အလေ့အကျင့်ကဘာလဲ? '' Kai-The ဥပဒသေမြား။ '' အိမ်ကအလေ့အကျင့်ကဘာလဲ? '' Kai-The ဥပဒသေမြား '' သန့်ရှင်းသောကဘာလဲ? '- ။ kai က' လောကကဘာလဲ '- ။ kai ငါတို့မြင်အရာအားလုံး, ထိတွေ့မှုများနှင့်မသက်ဆိုင်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်း, ဒီမှာကဤဥပဒသေမြား၌တည်ရှိ၏သူတို့ဟာဗုဒ္ဓဖြစ်ကြသည်။ ။ လမ်း, ဗုဒ္ဓ၏စိတ်နှလုံး။ " (ဖြစ်ခြင်း၏နှလုံး: ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ, စာမျက်နှာ 67 ကငျြ့တရားနှင့် Ethical သွန်သင်)
အဆိုပါပဉ္စမဥပဒသေမြားအတွက်အတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားအနက်ဖြစ်ပါတယ် ထေရဝါဒ နှင့် မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ။
Bikkhu ဗောဓိအဆိုပါပဉ္စမဥပဒသေမြားသို့မဟုတ် "intoxicants နေသောချဉ်နှင့်ရေစက်အရက်များ" တားမြစ်ဖို့ပါဠိကနေဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါတယ် "ခိုလှုံရာအဘို့အ Going" တွင်ကရှင်းပြသည် "ချဉ်နှင့်ရေစက်အရက်များနှင့်အခြား intoxicants ။ " တစ်ခုခုကိုလမ်း, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပညတ်၏လမျးညှနျရညျရှယျ "တ္ထုများ intoxicating ၏ဆည်းပူးနေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ heedlessness ကာကွယ်တားဆီးဖို့" ဖွစျတယျ။
Bikkhu ဗောဓိအရ, ပညတ်ကိုချိုးဖောက်ထားတဲ့ intoxicant တစ်ခု intoxicant, အ intoxicant ingesting များ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် intoxicant ၏အမှန်တကယ်စားသုံးမိပါယူရန်ရည်ရွယ်ချက်လိုအပ်သည်။ စစ်မှန်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဆေးဝါးပါဝင်တဲ့အရက်, opiates သို့မဟုတ်အခြား intoxicants ယူပြီးရေတွက်မထားဘူး, မယစ်မျိုး၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏနှင့်အတူအနံ့အစာစားထားဘူး။
ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေယေဘုယျအားတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုတောင်းဆိုန်းကျင်ချီတက်ကြဘူးပေမယ့်လူတွေကအရက်သောက်ခြင်းမှစိတ်ပျက်အားလျော့နေကြသည်အိပ်လေ၏။ အရက်ဆိုင်နှင့်အရက်စတိုးဆိုင်များအဓိကဥပုသ်ရက်ပိတ်ထားခံရဖို့အဘို့အထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်ရှိရာအရှေ့တောင်အာရှ, ခုနှစ်, ဘုန်းတော်ကြီးသင်သံဃာမကြာခဏခေါ်ဆိုသည်။
ထဲမှာကရှင်းပြသည်အဖြစ်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဆိုပါဥပဒသေမြားကိုလိုကျနာ မဟာယာန Brahmajala (ဗြဟ္မာ Net က) န္တာန်တိ။ (အဲဒီမှာနာမည်တူနဲ့ထေရဝါဒ္တာန်တိဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကကွဲပြားခြားနားသောစာသားများဖြစ်ပါသည်။ ) ဒီန္တာန်တိအတွက်, အရက်မသောက်မယ့် "အသေးအဖွဲ" ပြစ်မှုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ရောင်းချနေသည့်ဥပဒသေမြား၏အဓိကဖောက်ဖျက်ဖြစ်ပါတယ်။ အရက်မသောက်ရမှသာမိမိကိုယ်ကိုနာကျင်ပေမယ့် (ငါအခမဲ့ဖြန့်ဝေ, ယူဆ, နှင့်) ရောင်းအခြားသူများကိုနှိပ်စက်တာနှင့်တစ်ဦးကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ် Bodhisattva ကတိပြု။
မဟာယာနတို့၏တော်တော်များများကျောင်းတွေအတွင်းမှာပဲအရက်သောက်၏ကိစ္စအပေါ်အချို့သောဂိုဏ်းဂဏစွဲကွဲပြားမှုရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ပဉ္စမဥပဒသေမြားကိုမကြာခဏပကတိတားမြစ်ချက်အဖြစ်ကုသမပေးပါ။ ထို့ပြင် "intoxicant" ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုမပေးရုံအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး, လမ်းကြောင်းကနေကျွန်တော်တို့ကို distracts တစုံတခုကိုမျှထည့်သွင်းရန်ကျယ်ပြန့်နေပါတယ်။
ဇင်ဆရာ Reb Anderson ကပြောပါတယ် "ဟုအကျယ်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်တှငျကြှနျုပျတို့သုံးစွဲဘာမှ, ရှူ, ဒါမှမဟုတ်အားလုံးအသက်အဘို့ရှိခိုးခြင်းမရှိဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ထဲကိုထိုးသွင်းထားတဲ့ intoxicant ဖြစ်လာသည်။ " (ခံဖွောငျ့: ဇင်တှေးတောဆငျခွနှင့် Bodhisattva ဥပဒသေမြား, စာမျက်နှာ 137) ။
သူကသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကို manipulate မှကိုယ့်ကိုကိုယ်ထဲသို့တစ်ခုခုယူလာအဖြစ်မူးယစ်၏လုပ်ရပ်ဖော်ပြသည်။ ဤ "တစ်ခုခု" "ကော်ဖီ, လက်ဖက်ရည်, သွားဖုံးဝါး, သကြားလုံး, လိင်, အိပ်စက်ခြင်း, ပါဝါ, ကျော်ကြားမှု, ပင်စားနပ်ရိက္ခာ။ " နိုင်ပါတယ် ငါ၏အ intoxicants တစ်ခုမှာ (ငါအဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်ကျွန်မရာဇဝတ်မှုပြဇာတ် soothing ရှာတွေ့) ရုပ်သံဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကကျနော်တို့ဒါဟာပွော့နှင့်အသက်တာ၏တိုက်ရိုက်နှင့်ရင်းနှီးသောအတွေ့အကြုံကနေကိုယျ့ကိုယျကိုအာရုံပျက်၏နည်းလမ်းများအတိုင်း, intoxicants အဖြစ်ကသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့မဟုတ်ပါဘူးဂရုစိုက်ဖို့ကိုဆိုလိုတယ်ကော်ဖီ, လက်ဖက်ရည်, ဝါးသွားဖုံး, စတာတွေသုံးပြီးထံမှတားမြစ်ထားသောနေကြသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ တနည်းအားဖြင့်သမျှကျနော်တို့ heedlessness သို့ကိုယျ့ကိုယျကိုအာရုံအသုံးပြုထားတဲ့ intoxicant ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏သင်တန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အများစုက heedlessness ၏ကောင်းတဲ့, ပျူငှါနွေးထွေးသောပြည်နယ်များကို enable ပြုလုပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အထများဖွံ့ဖြိုး။ အဆိုပါပဉ္စမဥပဒသေမြားနဲ့အလုပ်လုပ်များ၏စိန်ခေါ်မှုကိုသူတို့အားတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာခွဲခြားသိမြင်သူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်မှီခို Origins ၏နိယာမ
တစ်ဦး Stream ထဲမှာတစ်ဦးကပူဖောင်း
တစ်တိုက်ရိုက် Curling အခမဲ့ Kick ကိုယူလုပ်နည်း
Perl့String LC () Function
ငါအကောင်းတစ်ဦး surfer ဖြစ်ဖို့ဘာကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သလဲ?
အဘယ်သူသည် Spark Plug တီထွင်?
Medical School ကျောင်းတွင်မသင့်အတွက်လား?
ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူး - ကျမ်းစာပုံပြင်အကျဉ်းချုပ်
Virgo မွန်း (Transit) - အဆိုပါ Mood နှင့်ဖြစ်ပျက်
Fogging နေ Scuba ရေငုပ်မျက်နှာဖုံးအောင်ကာကွယ်နိုင် 8 နည်းလမ်းများ
Intelligent ဒီဇိုင်း5အားနည်းချက်တွေကို Arguments
စပိန်ကြိယာ '' နေရဆဲ '' အသုံးပြုခြင်း
Monomer အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာများ (ဓာတုဗေဒ)
ဆောင်းရာသီနဲ့ Snow အကြောင်းအကောင်းဆုံးကလေးများ၏ရုပ်ပုံစာအုပ်များ